आफ्नो रड संग र जीत संग जीत मा रील ANGLER! यो पाँच रिल, बीस वेतन भिडियो स्लट फटली मछुआरेन्ट ओइट र उत्तम कप्तानको लागि अनन्त खोज को सुविधा दिन्छ!
ओइसमा सामेल हुनुहोस् किनभने त्यो सुखद दिनहुँ चन्द्रमा पोखरी माछा छ। ओइस्टर नि: शुल्क स्पिन र क्लिनी वाइल्ड्सको साथ, प्रायः जंगली प्रतीक र एक अभिनव "समय लाई माछा!" बोनस खेल, यो मत्स्य पालन यात्रा झीलमा कुनै साधारण दिन हुनेछैन!
एङ्गलर अपडेट गरिएको: फेब्रुअरी 6, 2019 लेखक: आमिर Berrey
2.0.0.1 हट मसी
2.0.0.3 अविश्वसनीय हल्क
2.0.0.4 खेल बॉल
2.0.0.6 गोल्डेन टिकट
2.0.0.7 युरोपेली ब्ल्याक जैक सुन